> Resource > Android > Sida loo kaabta HTC Mid ka mid ah Data on PC A si sahlan
Ma doonaysaa in la sameeyo gurmad ah maalin kasta ee aad HTC Mid ka mid ah? Sidaas marka ay wax dhacaan, waxaad isla markiiba ka heli kartaa wax walba oo aad dib ugu HTC Mid ka mid ah. Backing ilaa HTC Mid ka mid ah macluumaadka ay u PC waa mid aad u fudud iyadoo la kaashanayo tababare xunna loogu talagalay Android magacaabay Wondershare MobileGo for Android ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Tani qabaal Android siinayaa fursad ay ku soo xiriiro gurmad, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, jadwalka taariikhda, music, info playlists, videos, barnaamijyadooda, sawiro ku saabsan HTC Mid ka mid ah in ay PC aad.
Download version xorta ah tijaabo si ay u sameeyaan HTC mid gurmad.
Full Hage ku saabsan sida loo raad raac HTC Mid ka mid ah macluumaadka
Sida laga soo xigtay xaaladdaada, dooran version saxda ah ee tababare tan Android oo ku xidh aad kombuutarka Windows ama computer Mac. In hage hoos ku qoran, waxaan la wadaagi doonaa sida loo sameeyo HTC Mid ka mid ah gurmad la version Windows ah.
Hadda, ordo Tababaraha this Android aad kombuutarka. Markaas, waxaad ka heli suuqa kala xiriir.
Tallaabada 1. Soo qaado aad HTC Mid ka mid ah xiran
The version Windows shaqaysaa si fiican u dhex WiFi la cable USB Android. Sidaa darteed, aad u hesho HTC Mid ka mid ah ku xidhan yahay PC ee labada via cable USB ama WiFi. Wakhti ma MobileGo for Android aqoonsan aad HTC Mid ka mid ah. Markaas, waxaa tusi doonaa HTC Mid ka mid ah in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. kaabta HTC Mid ka mid ah
On line hoose ee suuqa kala aasaasiga ah, guji "kaabta One-Click". Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax gurmad ah daaqad. By default, wax kasta oo ka mid ah HTC ay ku jiraan xiriiro, barnaamijyadooda iyo fariimaha qoraalka ah waa la hubiyaa. Haddii aad jeceshahay in aad eegista eegista dib ilaa HTC Mid ka mid ah macluumaadka, fadlan uncheck xogta aadan rabin in gurmad.
Markaas, guji "Browse" in ay doortaan jidkaa ka badbaadiyo in ay ku kaydiso file gurmad ah. Ka dib markii in, guji "Back Up". Tababaraha Tani Android bilaabo inuu xog gurmad. Hubi in Mid ka mid ah HTC aad xiran yahay inta ay socoto gurmad ah. Marka lagu sameeyey, guji "OK" dhammayn gurmad ama "Folder Open" dedeg meesha file gurmad la badbaadiyey.
Daawo video ku saabsan sida loo raad raac One HTC ah
Ka sokow taageero ilaa dhamaan xogta ku saabsan HTC Mid ka mid ah hal click, aad awood u taageerto ilaa music, sawiro, videos, xiriirada, SMS iyo barnaamijyadooda mid mid. Tag galeeysid ka tegey oo guji tab kasta. Markaas, furmo u dhiganta, gurmad waxa aad rabto in aad ku PC ah.
Iyadoo MobileGo for Android, aad awoodo gebi ahaanba xor ka soo gaartay xog kasta. Hadda, isku day Tababaraha this Android si ay u helaan wax walba oo xoojiyaa ka HTC Mid ka mid ah in ay PC!